Factors of Internal Migration: A Case Study of Mandalay Industrial Zone, Mandalay ﻿
Lwin Lwin Aung (2nd International Conference on Burma/Myanmar studies, 2016)
Internal migration is the movement of people from one place to another place withinacountry. People migrate foravariety of reasons. It commonly takes place because of push factors of less opportunities within the ...
Demography: A Case Study of Internal Migrant Workers in Food and Beverage Industry, Mandalay ﻿
Lwin Lwin Aung (Australia Myanmar Institute (AMI), 2016)
Migration is one of the demographic components of population change, and today demography studies the size, composition and distribution ofapopulation. The composition ofapopulation includes measurable characteristics ...
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ဆည်ပေါက်ရွာ နေသူတို့၏ လူမှုရေး အခြေအနေများကိုစီးပွါးရေးနှင့်ယှဉ်တွဲလျက် ကွင်းဆင်းလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁၉၅၃ မှ ၁၉၇၃ ခုနှစ်အထိ) (Comparative Studies between Economic and Social Situations of People Living in Sepauk Village, Kyaukpadaung Township (1953 to 1973)) ﻿
ပဲခူးတိုင်း၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများရှိ အရှို (မြေပြန့်) ချင်းတိုင်းရင်း သားတို့၏ လူမှုရေး ဖွဲ့စည်းပုံ (Social organization of Asho Chin National living in villages near Pantaung Township) ﻿
မြန်မာဘာသာစကားရှိ နေ့စဉ်သုံးမွေးစားစကားလုံးများကို ဘာသာဗေဒအမြင်နှင့် လေ့လာချက် ﻿
Khine Khine Thin (University of Yangon, 2008)
Khin Thandar Kyaw (University of Yangon, 2007)
သုဝဏ္ဏသျှံသူဌေးခန်းပျို့ စစ်တမ်းနှင့်အဖွင့်ကျမ်း ﻿
Khin Swe Myint (University of Yangon, 2008)
မြန်မာဆွေမျိုးစပ်ဝေါဟာရများကို အတ္ထဗေဒ၊ လူမှုဘာသာဗေဒ အမြင်တို့ဖြင့် လေ့လာခြင်း ﻿
Khin Myat Thwe (University of Yangon, 2008)
မြန်မာဘာသာစကားနှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်းနိယာမ ﻿
Khin Maryar (University of Yangon, 2008)
ဦးဩဘာသ၏ မဟောသဓဇာတ်တော်ကိုအခြေပြု၍ ပါဠိဆန်သောမြန်မာစကားပြေ အရေးအသားကိုစိစစ်ခြင်း ﻿
Khin Htay Myint (University of Yangon, 2008)
Hla Nyut (University of Yangon, 2008)